Fahamka R ee CRM | Martech Zone
Isniin, Janaayo 28, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kaliya waxaan aqrinayay qoraal wanaagsan oo ku saabsan CRM waxaanan u maleynayaa inay jirto hal baaxad weyn, oo weyn, oo daloollan inta badan hirgelinta CRM… Xiriirka.
Waa maxay Xiriir?
xiriirka u baahan a xiriir laba-dhinac ah, wax caadi ahaan ka maqan CRM kasta. Dhammaan CRM-yada waaweyn ee suuqa ku jira waxay shaqo fiican u qabtaan qabashada xogta soo socota - laakiin waxba kama qabtaan inay dhammaystiraan wareegga. Waxaan rumaysanahay inay tani tahay furaha sababta inta badan fulinta CRM ay u fashilmaan. Waana aaminsanahay inay tahay isku xirka ugu daciifka badan dhufto ee CRM.
CRM Waa la qeexay
Mid ka mid ah fiiri raadinta Google ee Maamulka Xiriirka Macaamiisha oo waxaad ogaan doontaa in iibiye kasta uu qeexayo CRM si adag oo la xiriira awooda barnaamijyadooda. Tusaale ahaan, waa tan Qeexitaanka Salesforce:
Qeexitaanka ugu fudud, ugu ballaaran waxaa laga heli karaa magaca: CRM waa hab dhameystiran oo lagu maareeyo xiriirka macaamiishaada? oo ay ku jiraan macaamiisha mustaqbalka? muddo-dheer iyo faa'iido wadaag ah. Si gaar ah, nidaamyada CRM ee casriga ahi waxay awood kuu siinayaan inaad soo qabato macluumaadka ku hareeraysan macaamilka macaamiisha isla markaana aad dhexgeliso hawl kasta oo la xiriirta macaamiisha iyo barta xogta.
Hmmm… Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn wax iska yimid in barnaamijka 'Salesforce platform' uu gebi ahaanba udub dhexaad u yahay soo qabashada xogta gadaalna dhamaadka uu leeyahay awood isdhexgal xoogan. Weli waxaan u maleynayaa inay tahay kala bar uun xal CRM ah.
Qeybta kale ee xalka waxay ku jirtaa sida aad ugu xirmi laheyd macaamilkaaga. CRM-gaagu waa inuu udub dhexaad u yahay dhibcaha kicinta si loo saadaaliyo, sida ugu wanaagsan ee aad awoodid, waqtiyada ay tahay inaad ku dhaqaaqdo xiriirka aad la leedahay macmiilkaaga. Sideed u horumarineysaa macaamiishaada iyadoo loo marayo meertada nolosha macaamiisha?
Tusaalooyinka Waxqabadka CRM ee Faa'iidada leh
Hadday tahay rajo, waa maxay badeecadaha ama adeegyada ay xiiseeyaan isgaarsiintaada ama boggaaga (is-dhexgalka gorfaynta)? Goorma ayey filayaan inaad mar kale la xiriiri doontid? Ma haysaa digniino loo diyaariyay inay ku soo ogeysiiyaan goorta lala xiriirayo ama emayllada maadiga ah ee la qorsheeyay?
Hadday tahay rajo ama macaamil, mareegtadaadu waxay si firfircoon wax ugu qabataa alaabooyinka ama adeegyada ay bixiyeen xiisaha ama aad iibisay? Waxaan qabaa Amazon.com shaqo weyn ayuu ka qabtaa isagoo ii soo jeedinaya buugaag - laakiin way iska indha tirayaan xaqiiqda ah inaan wax ku iibsado Barnes iyo Noble, sidoo kale. Hadday is dhexgaleen Shelfari or Wanaagsan Koontadayda, way ogaan lahaayeen wixii aan hore u soo iibsaday oo mar dambe iima tusi doonaan.
Ma u sameysay macmiilkaaga qiime aad markaas ku shaqeyn karto? Haddaan kula joogo kumanaan doollar, sidee baad iila dhaqmaysaa si ka duwan dadyowga aan sidaas ahayn? Waxaan aadaa dukaan weyn oo kafee ah oo maxalliga ah oo i garaacaya wakhti yar markii aan helo dhexdhexaad. Magacaygu way igu yaqaanaan waxayna aqoonsadaan inaan ka qiimo badanahay iyaga macaamilka soo baxa bishiiba mar.
Miyaad garatay goorta kicinta ay tahay inay dadka ku sii joogaan ama kaa tagaan? Haddii akhristaha celceliska ah ee joornaalkaaga iimaylka uu furmo 5, oo uusan weligaa wax garaacin, ka dibna aan laga bixin, maxaad uga duwan tahay warside lambar 5 akhristaha aan waligiis riixin?
Goorma ayey ahayd markii ugu dambeysay ee aad u mahad celisid ama aad codsato jawaab celin ku saabsan adeeggaaga? Ma leedahay marinno kharash bixinno ama xaddid hawleed loo qoondeeyey inaad kula xiriirto macaamiisha ku bixiya $ X ama dukaamaysanaya X kasta oo ah maalmo, toddobaadyo ama bilo?
Jadwalka, emayllada kiciyay, abaalmarinta, iyo waxyaabaha firfircoon ayaa ah waxyaabaha muhiimka u ah ADIGA inaad xiriirka u sameyso macaamilkaaga oo aad ka caawiso nolosha macaamiisha. Mar labaad fiiri arjigaaga CRM… sidee buu kaaga caawinayaa inaad taas sameyso? Ma aha in adiga laguu daayo inaad horumariso dhammaan isdhexgalkaan aad la leedahay CRM-gaaga. Hadday sidaas tahay, ma lihid nidaam CRM ah, waxaad kaliya haysataa keyd macaamiil.
Falanqaynta, Gawaarida Dukaameysiga, Suuqgeynta Emailka iyo Nidaamyada Maareynta Mawduucyada Websaydhku waa inay dhammaantood isku dhafan yihiin si aad u hesho hirgelinta CRM oo si buuxda uga faa'iideysan doonta kharashka iyo dadaalka bilowga ah ee looga baahan yahay sameynta hirgelinta CRM. Hadaadan isku xir dhibcaha, ma lihid xal CRM ah.
FIIRO GAAR AH: Markii aan sameeyay raadinta ilaha CRM iyo shaxanka wanaagsan ee shabakada, waxaan helay ilo aad u wanaagsan, Macalinka Suuqgeynta.
Tags: CRMxiriirka macaamiishamaamulka xiriirka macaamiishamudnaantadib u eegis sheygau qalma hogaamintaxiriirkaNaqshad wax ku ool ahhabka iibkaSlider
Baahinta Warbaahinta Baaxadda leh ee Shabakadaha Bulshadda = GUUL
Jan 28, 2008 saacadu markay ahayd 7:13 PM
Waxaan si daacad ah u maleynayaa in inta badan nidaamyada CRM ay tahay in sifiican loogu yeero nidaamyada PRM maxaa yeelay iyagu kuma saabsana Maareynta Xiriirka Macaamiisha laakiin waxay ka hadlayaan Maareynta Xiriirka Fursada gaar ahaan meesha aan ka walwalsanahay sii wadida XARIIRKA qof walba. Nidaamyadan badankood waxaa loo sameeyay ugaarsadayaasha si ka duwan kuwa soo urursada runtiina kuma haboona xitaa istiraatiijiyad 'dhul iyo ballaarin' oo runtii ku baaqeysa in la dhiso xiriir dheer oo waara.
Nidaamyada CRM waxaa loo sameeyay in lagu maareeyo tiro badan oo ah "macaamiil" iyo dhisidda xiriirrada waxaa si wanaagsan loo qaban karaa oo keliya markaan tixgelinno dadaallada xoogga la saaray ee macaamiisha tirada yar.
Waad saxantahay sababtuna waxay tahay nidaamyadan CRM looma dhisin ujeeddooyinka loo adeegsanayo.
Waxaa laga yaabaa inaad ka saxsantahay inaad ugu yeerto "Nidaamyada Maareynta Rajada“, Ama“PMS”Marka la soo gaabiyo Kinda waxay leedahay giraan maahsan, maya? '-)
U ayaa sheegay, maahan aniga
Qodobbo waaweyn. Iyada oo ikhtiyaarro badan oo fudud ay shirkaduhu ku bilaabi karaan la macaamilidda macaamiisha hal heer oo keliya, waa in aysan jirin cudur daar aan sidaas la yeelin (facebook, blogs, email).
Shirkad kastaa waxay isticmaashaa CRM, u isticmaalkeeda si wax ku ool ah waxay noqon kartaa soo jeedinta qiimaha ay bixiso shirkaddaada, iyo dhammaanba talooyinkaaga farta.
Jan 29, 2008 saacadu markay ahayd 10:59 PM
Markii aan wax ku bartay waxoogaa dib u noqosho ah, qaar badan ayaa CRM u adeegsada 'dabagalka' himilooyinkooda halkii ay xiriirro kula abuuri lahaayeen.
Miyeysan khubaradan CRM xasuusan sida ay ahayd markii ay shukaansanayeen?
Miyaanay ahayn fikradda dhan ee ka dambeysa CRM dhisidda xiriirro waara oo waara? Marka, goorma ayaa dabagalka waligiis uu sababay xiriir? Sideen uga falceliyaa shirkadaha muujiya inta ay 'ka ogyihiin' aniga? Dhab ahaan, nabad-galyo
Maxaa xal ah? I weydii, igu lug yeelo, i xiisee oo i khiyaanee, ila yaabi oo dareen gaar ah iga dhig. Wow, taasi way adkeyd.
Sidee ku dhacday in shirkadaha uun aynaan helin? Ma waxay ka baqayaan inay wax weydiiyaan? Diidmo cabsi?
Cunto fikirka: hadaanan xiiseyneyn, miyaadan rabin inaad ogaato sida ugu dhaqsiyaha badan? Marka waxaad diiradda saari kartaa kuwa xiiseynaya?